हेलोवीन केक - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
मैले यसका लागि हेलोवीन केक बनाएँ पार्टी कि हामी साथीको घरमा तयार छौं हाम्रा साना बच्चाहरूलाई चकित पार्न।
यस प्रकारको केकहरू तयार गर्नु धेरै सजिलो छ, बेसको लागि हामीलेaप्रयोग गरेका छौं सुन्तला केक त्यसोभए हामीले भर्खर यसलाई एउटा कभर गर्नुपर्‍यो चकलेट कभर र यसलाई गहनाहरूसँग सजाउनुहोस् (तपाईंलाई सबैभन्दा डरलाग्दो तपाईंले भेट्टाउनुभयो!) 😉
यो हेलोवीन केक साना बच्चाहरूसँग पकाउन र रमाइलो गर्न पनि राम्रो बहाना हुन सक्छ।
1 हेलोवीन केक
हेलोवीन पार्टीको लागि उत्तम केक।
तयारी समय: 11M
खाना पकाउने समय: 19M
बेस केक को लागी
सुन्तला स्पंज केक (नुस्खा हेर्नुहोस्) यहाँ)
गाढा चकलेट कोटिंगका लागि:
सूर्यफूल तेल को 50 g
300 चकलेट fondant को छ
सेतो चकलेट टपिंगको लागि:
सेतो चकलेटको १ ट्याब्लेट
रातो जेली बीन्स
हामी सुन्तला स्पन्ज केक बनाउँछौं (नुस्खा हेर्नुहोस्) यहाँ).
मोल्डबाट हटाए पछि हामी गाढा चकलेट कोटिंग तयार गर्दछौं। हामी गिलासमा तेल हाल्छौं र यसलाई तताउँछौं Minutes मिनेट º०º गति १.
हामीले चकलेटलाई टुक्राहरू र कार्यक्रममा राख्यौं १ मिनेट º०º गति २।
हामी यो निश्चित गर्छौं कि यो तरल क्रीम जस्तै छ, तर हामीले 30० सेकेन्डको गति put राख्यौं।
हामी यसलाई केकमा खन्याउँदछौं, यसलाई राम्रोसँग कभर गरेर, स्प्याटुला प्रयोग गरेर हामी पक्षहरू पनि चकलेटसँगै सजाउँछौं।
सेतो चकलेट पिघ्नको लागि, हामी सेतो चकलेटको ट्याब्लेट टुक्राहरूमा राख्छौं प्लास्टिकको झोला प्रकार पेस्ट्री पेगमा र हामी यसलाई टोकरीमा राख्छौं। हामीले पानीलाई गिलासमा राख्यौं, हामीले यसको हालतमा टोकरी परिचय गराउँछौं र हामी प्रोग्राम गर्दछौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
जब सेतो चकलेट पिघलाइन्छ, हामी प्लास्टिकको झोला बाहिर निकाल्छौं, हामी यसमा एउटा सानो प्वाल बनाउँछौं जसमा बैगको कुना काट्छौं र हामीसँग पहिले नै एक प्रकारको सेतो चकलेट पेन्सिल छ जसमा स्पाइडर वेबमा रंग गर्न सक्षम हुनेछौं। केक।
"हेप्पी हेलोवीन" पोस्टर बनाउन हामी काटिएको रोटीको टुक्रा प्रयोग गर्दछौं। हामी यसलाई डार्क चकलेटले नुहाउँछौं र यो सुकिसकेपछि हामी चिठीहरू लेख्छौं र यसलाई केकमा समात्छौं, दुई वफरमा आराम गरेर।
माकुरो एक गोल कुकी मोल्डको साथ मद्दत गरेर बनेको हुन्छ। हामीले दुई सर्कल काट्यौं र तिनीहरूलाई डार्क चकलेटले नुहाएर हामी उनीहरूसँग शामिल भयौं। छेउमा हामी खुट्टाहरू रातो लाईकोरिसका टुक्राहरू परिचय दिन्छौं र दुईवटा जेली सिमीहरू माथि राख्छौं यदि तिनीहरू आँखा थिए भने।
हामीले केकमा माकुरो राख्यौं र शेष सजावट विशिष्ट हेलोवीन व्यवहार हो।
थप जानकारी - सुन्तला स्पंज केक
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: हेलोवीन, १ घण्टा भन्दा कम, Postres, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » हेलोवीन » हेलोवीन केक
तपाईं कत्ति सुन्दर आउनुभयो, र यो सानाका लागि राम्रो विचार हो !! यदि मैले यो देखेको छु भने मसँग यो घटनाको लागि पकाउनु पर्छ! तर यो दिनको लागि पेन्डि remains छ !!
धन्यवाद नतालिया, सत्य यो हो कि यो सुन्दर र बौनेहरूले यसलाई मन पराए र अविश्वसनीय चीजहरूको साथ जुन तपाईंले यो गर्नुभयो तपाईंको सिलाई र गाउनु हो।
मलाई यो मन पर्छ, विशेष गरी "bichillos" र म पक्का छु कि यो साँच्चै राम्रो छ।
धन्यबाद गोइजाल्डे, सत्य यो हो कि बच्चाहरूले यसलाई मन पराउँथे। झगडाबाट बच्न तपाईंले पार्टीमा सबै बच्चाहरूको लागि प्रत्येक प्रकारको एक बग राख्नुहुन्छ भनेर तपाईंले भर्खरै विचार गर्नुपर्छ ... तपाईंलाई थाहा छ!
नमस्ते सिल्भिया हामी हेलोवीन पार्टी तयार गर्दैछौं र तपाईंको रेसिपीहरूको आधारमा म बच्चाहरू र वयस्कहरू हाहाहाका लागि भोज तयार गर्न जाँदैछु। म कसरी जान्छु तपाईंलाई बताउँछु। केवल एक प्रश्न, सुन्तला केकको बारेमा, मलाई थाहा छैन कुन रगत खानी हो, के म कुनै सुन्तला प्रयोग गर्न सक्छु?
अर्को कुरा तपाईंसँग फ्रेन्च meringues बनाउनको लागि एक नुस्खा छ, बेक गरिएकाहरू, भूतहरू बनाउँन 🙂
मलाई भन ठीक छ? आलिंगन र सबै चीजको लागि धन्यवाद।
पक्कै पार्टी तपाईंको लागि ठूलो हुनेछ, कत्ति राम्रो !! सुन्तला केकलाई सामान्य सुन्तला बनाउनुहोस्, मैले साuine्गुएल राखें किनकि उनीहरूले मलाई यो मेरो सुपरस्ट फल टोकरीमा केही विशेष रूपमा मेरो जन्मदिनको उपहारको रूपमा दिएका छन्, तर म सँधै सन्तवबाट पनि गर्दछु। म तपाईंलाई meringues को लागि नुस्खा भेट्टाउन जाँदैछु र यदि मैले यो फेला पारेँ, मसँग प्रकाशन गर्न समय छैन, म यसलाई तपाईंको ईमेलमा पठाउँछु।
अभिवादन र हामीलाई अनुसरण गर्न धेरै धेरै धन्यबाद
एम। एन्जलस भन्यो
मैले सुन्तलाको केक बनाएँ र यो नबढेको देखियो। मैले यो गरे जस्तो तपाईले गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन के भयो। अभिवादन, मलाई व्यंजनहरु मन पर्छ।
एम। एन्जलसलाई जवाफ दिनुहोस्
मारी कारमेन म कल्पना गर्दछु कि तपाईं खमीर थप्न बिर्सनुहुनेछैन, त्यस्तै नै यो चुलोको कारणले हुन सक्छ, मलाई यस्तो मौसम भयो कि केहि चीजहरू अन्य पटक जति उकालो हुँदैनन् र अब म यसलाई पहिले तान्न मात्र प्रशस्त पार्छु। त्यसोभए यो राम्रोसँग उगन्छ र जब यसको १० मिनेट बाँकी हुन्छ, मैले माथि तातो राखें ता पनि यो खैरो छ।
कसरी हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। शुभकामना
मलाई केकको विचार मनपर्छ, म यसलाई यी दिनहरूको लागि लेख्छु, र रुथको लागि एउटा मात्र कुरा, ब्लग "स्पून स्पीड" मा जानुहोस्, यी दिनहरू उनीहरू हेलोवीनमा क्र्यास कोर्स गर्दैछन्। अन्य व्यञ्जनहरु मध्ये, त्यहाँ भूतहरू छन् जुन तपाईंले खोज्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई अँगालो र खुशी हेलोवीन
मारीन, मलाई खुशी छ कि तपाईले केक मनपराउनुभएको छ र तपाईको योगदानका लागि धेरै धन्यबाद, हामी सबै हेलोवीनको बारेमा सबै कुरा सिक्न पर्खिरहेका छौं।
जो आश्चर्यजनक छ, कसरी राम्रो Tartics मम्म्म्म्म्म् मम्म बाहिर आउँछु अब म ट्रोकिको ट्रिक खाइरहेको थियो !! 😉
Mbea लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि हामी सक्दछौं, हामी तपाईंलाई एउटा टुक्रा पठाउनेछौं। यो स्वादिष्ट छ! शुभकामना।
नमस्ते सिल्विया, नमस्ते मारियोन
निर्देशनहरूको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। मारियनले टिप्पणी गरेको ब्लगमा मैले एउटा प्रयोग गरेको छु र सत्य यो हो कि मेरिue्ग धेरै राम्रो छ। मुश्किल भागले भूतलाई आकार दिन्छ। अब म यो ओभनमा छ, हेर्नको लागि यो एक पटक कसरी पकाएको देखिन्छ। भोली म तिमीलाई अधिक बताउँछु।
एक अँध्यारो र शुभ रात्री !!!!
रूथ, तिनीहरू तपाईं मा धेरै राम्रो भएको हुनुपर्छ। तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
तपाईंसँग केहि महान विचारहरू छन्, माकुरोहरूले पनि रेडिमेड खरीद गरेका छैनन्। म यो सुन्तला रंगको केक कोशिस गर्नेछु कि म अझै कोशिश गरी सकेको छैन, तर म सजावट संग मेरो मनोरंजन छैन। Bye
Marivi लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं मारिवीलाई प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, चकलेट र सुन्तलाको संयोजन विलासी छ र यदि तपाईंसँग साना मकडीहरूको लागि समय छैन भने, तिनीहरूमा डरलाग्दो व्यवहार राख्नुहोस् र तिनीहरूले पनि यसलाई प्रेम गर्नेछन्।
सबैलाई नमस्कार! थर्मोमिक्सको साथ यो व्यञ्जनहरू कति रमाईलो छन्! मेरो प्रेमीले पनि यो मसँग प्रयोग गर्दछ! म निश्चित रूपमा यो हेलोविन केक बनाउनेछु, म आफ्ना केटीहरू र मेरा नयाँ भान्जाहरू अचम्मित गर्न चाहन्छु! हरेक दिन नयाँ व्यंजनहरू योगदान गरेकोमा धन्यवाद, म कुनै पढ्न छुटाउँदिन। चुम्बन।
रोजा-आनालाई जवाफ दिनुहोस्
रोजा-आना, मलाई खुशी छ कि तपाईले हाम्रा व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुन्छ र हामीलाई दिनहुँ पछ्याउँनुहुन्छ, हामीलाई तपाईंको समर्थन दिनु भएकोमा धन्यवाद।
नमस्ते एलेना, तिनीहरू महान थिए। नुस्खाले भट्टीमा3घण्टा भन्यो मैले त्यसलाई कम छोडिदिए किनकी मलाई उनीहरू बाहिरीमा कडा मन पर्छ र भित्र नरम पनि, र उनीहरू स्वादिष्ट बाहिर आए। जब तपाईं चाहानुहुन्छ, म तपाईंलाई नुस्खा दिनेछु, यद्यपि म मारिनले मलाई दिएको एक प्रयोग गर्‍यो। केवल कुरा यो हो कि मैले कागतीको थोपाहरू राखिन जुन इमानदारीपूर्वक मलाई थाहा थिएन कि कहिले र कसरी राख्ने भनेर मैले यसलाई बेवास्ता गरें still र ती अझै पनि स्वादिष्ट थिए। भूतहरू आइतवारको खाजाको लागि आउँछन्।
यो हेलोवीन धेरै धेरै पकवान संग धेरै मजा हुन गइरहेको छ।
म खुसी छु, रूथ। यो हेलोवीन भयानक रमाइलो हुनेछ! शुभकामना।
हरेकलाई नमस्कार गर्नुहोस्:
रूथ, तपाईंले भर्खरै आइतवारको लागि विशेष पार्टी तयार गर्ने इच्छाले मलाई संक्रमित गर्नुभयो, मलाई लाग्छ कि म मेरा बच्चाहरू र मेरो श्रीमान्लाई चकित पार्न जाँदैछु ... वैसे तपाईंले भर्खरै प्रकाशित गर्नुभएका औंलाहरूले मलाई घृणा गरे, तर म ' म तिनीहरूलाई बनाउन लागिरहेको छु ... म तपाईंलाई फेरि लेख्ने प्रतिज्ञा गर्दछु कि यस वर्ष कसरी डरलाग्दो मेनू भयो!
र एलेना र सिल्भियालाई पकाउनेहरूका लागि एक लाख धन्यवाद, म तपाईंलाई हरेक दिन पछ्याउँछु।
धन्यबाद, मारीन, हामीलाई हरेक दिन देख्नका लागि।
म कस्तो राम्रो छु! सत्य यो हो कि म उत्साहित छु, म बाहिर थर्मामिक्स लिन्छु किनभने म मेरा साथीहरूसँगै गर्ने गर्छु, हहाहा म उनीहरूलाई विश्वास गर्छु कि भनेर हेर्न र तिनीहरूले पनि यसलाई खरीद गर्छन् 🙂
अर्को हप्ता हामी आफैंलाई बताउनेछौं कि सबै भाँडा कसरी गयो।
एलेना तपाई सबै थोकका लागि धन्यबाद !!!
चुम्बन र राम्रो हेलोवीन पार्टीहरू! कि तपाईं सबै डर को एक धेरै खर्च !!!!!
प्याज र टमाटर सॉस संग चिकन